Cod si sir ah Oo looga duubay Nabadoon Maxamed Xasan Xaad Sheegayne In Dil Loogu Hanjabay +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cod si sir ah Oo looga duubay Nabadoon Maxamed Xasan Xaad Sheegayne In Dil Loogu Hanjabay +COD
Gudoomiyaha Odayaasha dhaqanka Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa ku xog waramay in Madaxda Dowladda Somalia gaar ahaan Taliyaha Nabadsugida iyo Madaxweyne Xasan Sheekh ay ugu hanjabeen dil iyo xarig hadii uu ka hadlo tacadiyada ka socda Muqdisho.
Qof la ehela Gudoomiye Xaad ayaa cod sir ak ka duubay Nabadoonka, oo ka hadlaya xaaladda soo wajahday, wuxuuna yiri Maxamed Xaad “Wixii socday wax qaldan ayey ahaayeen laakiin wax ka daran ayaa yimid, waxaa yimid hanjabaad farabadan, dadkii tacadiyada socda ka hadlay, waa la xiray, waa la dhibaateeyay, aniga odaynimo ayaa la iiga leexday, waxaana leeygu yiri hadaadan ka aamusan hoowlgalada socda, waxaan kaa qaadi doonaa tilaabo sidaas darteed waan aqbalay, waana iska aamusay”.
Gudoomiye Xaad wuxuu sheegay inuu cabsi darteed uu iskaga aamusay kadib markii uu xaqiiqsaday in mas’uuliyiin Soomaaliyeed loo xiray kaliya aragtidooda siyaasadeed.
Xaad waxa kale oo hadalkiisa ka mid ahaa inay jiraan in dalka ay xukumaan laba dhinac oo ah kuwa muuqda iyo kuwa dadba, ayada oo aan la ogeyn cidda uu ula jeedo kuw dadban.
Si kastaba ha ahaatee, codkaan la helay ee Gudoomiyaha guurtida Hawiye waa sirtii ugu cusleyd ee ka marqaati kacday in Dowladda Somalia ay ku xadgudubtay xoriyada hadalka iyo aragtida siyaasadda.